Ukufumana kwakhona idatha ye-Outlook kwiifayile zeDiski yoMatshini, iiFayile zoGcino kunye neeFayile zeFayile
Ikhaya iimveliso DataNumen Outlook Repair Ukufumana kwakhona idatha ye-Outlook kwiifayile zeDiski yoMatshini, iiFayile zoGcino kunye neeFayile zeFayile
Ukuba i-Outlook PST /OST ifayile igcinwe kule fayile ilandelayo:
VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) ifayile (*. Vmdk). Umzekelo, uyayigcina i-PST / Outlook yakhoOST ifayile kwidiski ebonakalayo kwiVMWare.
Ifayile yeVirtual PC VHD (i-Virtual Hard Disk) ifayile (*. Vhd). Umzekelo, uyayigcina i-PST / Outlook yakhoOST ifayile kwidiski ebonakalayo kwiPC ebonakalayo. Okanye wenza ugcino lwe-PST yakho ye-Outlook /OST ifayile ngeWindows Backup kunye nokubuyisela umsebenzi.
Ifayile yomfanekiso weAcronis eyiyo (*. Tib)
Norton Ghost ifayile (*. gho, * .v2i)
Ifayile yeWindows NTBackup (*.bkf)
Ifayile yomfanekiso we-ISO (*. Iso)
Ifayile yomfanekiso weDiski (*. Img)
Ifayile yomfanekiso weCD / DVD (*. Bin)
Utywala 120% Mirror Ifayile yeDiski yefayile (MDF) ifayile (*. Mdf)
Ifayile yomfanekiso weNero (*. Nrg)
kwaye awukwazi ukufikelela kwidatha kwi-PST /OST fayile ngezizathu ezithile, umzekelo:
Ucima i-Outlook PST /OST ifayile esuka kwidiski ebonakalayo kwi-VMWare okanye kwi-PC eyiyo.
Uyifomatha idiski ebonakalayo kwi-VMWare okanye kwi-PC eyiyo ngempazamo.
Idiski ebonakalayo kwi-VMWare okanye kwi-PC eyiyo ayinakubekwa okanye isungulwe ngokufanelekileyo.
Idiski ebonakalayo kwi-VMWare okanye kwi-PC eyiyo yonakele okanye yonakele.
Ifayile yogcino kwimithombo yeendaba yogcino yonakele okanye yonakele kwaye awukwazi ukubuyisela i-PST yakhoOST ifayile kuyo.
Ifayile yomfanekiso wediski yonakele okanye yonakele kwaye awukwazi ukuyifumana iPST /OST ifayile kuyo.
Emva koko unokufumana kwakhona idatha kwi-PST /OST ifayile ngokuskena kunye nokufumana kwakhona iifayile ezihambelana nomatshini wediski, ifayile yogcino okanye ifayile yediski ene DataNumen Outlook Repair. Khetha nje ifayile yomatshini wediski ebonakalayo, ifayile yogcino okanye ifayile yediski njengefayile yomthombo eza kulungiswa, DataNumen Outlook Repair iya kuskena ifayile yomthombo, uyihlalutye, ifumane idatha ye-Outlook egcinwe kwifayile, kwaye iyikhuphe kwifayile yePST emiselweyo.
Ukuba i-Outlook PST /OST ifayile igcinwe kwidiski enzima okanye idrive, kwaye awukwazi ukufikelela kwi-PST /OST fayile ngezizathu ezithile, umzekelo:
Ucima i-Outlook PST /OST ifayile kwi-hard disk okanye kwi-drive.
Uyifomatha idiski enzima okanye uqhube ngempazamo.
Idiski yakho enzima okanye idrive iyasilela kwaye awunakufikelela kwiifayile kwakhona.
Emva koko unokusebenzisa DataNumen Disk Image ukwenza umfanekiso wediski okanye idrive, emva koko uphinde ufumane iPST /OST idatha evela kwifayile yomfanekiso nge DataNumen Outlook Repair.